NepalPatra Health - Nepal's First 100% trusted onlne news
भाद्र ८, २०७६ | 25th August, 2019
दम रोगको प्राकृतिक रोकथाम र उपचार
बढ्दो वायुप्रदुषण सँगै शहरी क्षत्रमा दमको रोगिहरुको संख्या बढदै गइरहेको तथ्य सार्बजनिक भएको छ । दम एक स्वास प्रस्वास सम्बन्धी नसर्ने रोग हो, जुन रोगको बिरामीको स्वास नली र फोक्सो बिचको नली ब्रोङकाइमा अप्ठ्यारो हुने, फोक्सो सुन्निने, बढी सिँगान र खकार उत्पादन भई स्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखा पर्छ र रोग जिर्ण भएमा फोक्सोले […]
किन हुन्छ त हिस्टेरिया ?
किन हुन्छ त हिस्टेरिया ? हिस्टेरियाका बिभिन्न कारणहरु छन तर यही कारणहरु नै हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो Universal कारणहरु छैनन किनकी यसका कारणहरुका बारेमा बिभिन्न मतमतान्तर रहेको छ । तर पनि केही प्रमुख कारणहरु भने निम्न रहेका छन । मन्द बुद्धि: मन्द बुद्धीको कारणले पनि हिस्टेरिया हुने कुरा बिभिन्न अध्ययनहरुले देखायेको छ । मन्द बुद्धीले […]
हिस्टेरिया बारे जान्नै पर्ने कुराहरु
हिस्टेरिया केहो ? हिस्टेरिया एक मेन्टल डिजिज (मनोजन्य रोग) हो । जसमा मानिसको मानसिक पक्षको अभिब्यक्ती (एक्स्प्रेशन्) शारिरिक लक्षणहरुबाट हुन्छ। उक्त ब्यक्तिमा रहेको मनोद्वोन्द एक्कासी शारिरिक लक्षणहरुमा देखा पर्दछ । मनभित्र उत्पन्न हुने अन्तरद्वन्द्वका कारण केही मानिसहरुमा तनाब र चिन्ता उत्पन्न हुन्छ । जसको कारणले उक्त मानिसहरुमा एक गहिरो निराशा उत्पन्न हुन्छ र उक्त निराशा […]
बिवाहमा कती बर्सको अन्तर राम्रो ?
प्राय पुरुष आफूभन्दा कम उमेरका लाई विवाह गर्न रुचाउछन् । भविष्यमा त्यही उमेर भिन्नताले यौन जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइदैंन । चिकित्सकहरु विवाहका लागि बढीमा ५ वर्षसम्मको मात्र ग्याप राम्रो हुने बताउछन् । एकै उमेरमा विवाह गर्दा भावनात्मक सम्बन्ध र सोचाइ पनि मिल्ने भएकाले धेरै लामो अन्तरमा विवाह गर्नुहुँदैन । […]
अन्डा सेवनका दस फाइदाहरु
अन्डालाइ सुपर फुड पनि भनिन्छ । अन्डामा प्रचुर मात्रामा हाम्रो शरिरलाई चाहिने पोषक तत्वहरु पाइन्छ । यहाँ अन्डा सेवनको दश फाइदाहरु प्रस्तुत गरिएको छ । १. यो आत्यन्तै पोषिलो हुन्छ् हाम्रो शरिरलाई चहिने धेरै खाले पोषक तत्व अन्डामा पाइन्छ । एउटा सिङो उमालेको अन्डामा पाइने पोषक तत्वहरु यस प्रकार छन । भिटामिन “ए” – ६ […]
औषधिको प्रकार र त्यसले काम गर्ने तरिका
-राम ठकुरी आजको बैज्ञानिक युगमा मानिसको दैनिकी सह्ज हुँदै गइरहेको छ । बिज्ञान प्रबिधिको क्रमिक बिकास हुने क्रममा बिभिन्न प्रकारका रोग उपचारमा प्रयोग हुने नयाँ नयाँ प्रबिधी र औषधीहरुको बिकास भइरहेको छ । औषधिको प्रकार रोग उपचारमा प्रयोग हुने औषधीलाई मुख्यतया दुइ प्रकारमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो प्रकारमा आयुर्बेदिक औषधी पर्दछ । आयुर्बेदिक औषधी […]
यौनशक्ति बढाउने ७ तरिका
१. चिन्तामुक्त रहने के हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? जस्ता कुनै पनि प्रकारका यौन अपेक्षाबाट आफ्नो दिमागलाई पूर्ण तरिकाले मुक्त राख्नुस् । सेक्सका बेला कुनै पनि प्रकारको चिन्ता या दबाब महशुस नगर्ने । यदि तनाव हुन्छ भने ध्यान गर्नुस् र आफ्नो मूड बदल्नुस् । साथै, राम्ररी निद्रा पर्ने गरी सुत्नुपनि स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । […]
डा भोला रिजाललाई बीबीसीमा जब आफ्नै अस्पतालको शौचालय सफा गर्न नसक्ने भनियो …
डा भोला रिजालको नेतृत्वमा बुधवार डा गोविन्द केसीको विरुद्धमा प्रदर्शन भयो । डा केसीसँग भएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग मात्रै थिएन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा नाराबाजी भएको थियो । यही सन्दर्भमा बीबीसीले उनीसँग अन्तर्वार्ता गर्यो जहाँ उनले आफ्नो हर्कतको बचाउ गर्ने कोशिश गरे । तर, बीबीसीकी संवाददाता रमा पराजुलीले आफैं बिरामी […]
मृगौलालाई सफा र स्वस्थ्य राख्ने एक सजिलो उपाय
– राम ठकुरी मानव शरीरको भित्री अङहरु मध्य मृगौला एकदमै महत्वपूर्ण फिल्टर हो । यसले हाम्रो शरीरलाई अति नै आवश्यक तत्वलाई राखेर अनावश्यक विकारलाई पिसाब हुँदै बाहिर पठाउन फिल्टरको काम गर्दछ । हामीले पानी राख्ने फिल्टर जस्तै यसलाई पनि सफा गर्ने हो भने अझ राम्रोसँग काम गर्ने निश्चित छ । साथै किड्नी सम्बन्धी जटिल समस्याहरुबाट […]
मानिसलाई डर किन र कसरी लाग्दछ ?
मानव जीवनमा कसै कसैले धेरै दुःखदायी, अकल्पनीय र आफु मर्माहित हुने घटनाहरू देख्नु परेको हुन्छ वा भोग्नु समेत परेको हुन सक्छ। मानिसलाई शारीरिक पीडा बाहेक मानसिक पीडा पनि हुन्छ । मानसिक पीडा शारीरिक पीडा जस्तो बाहिर नदेखिने हुँदा यसलाई व्याख्या गर्न गाह्रो पर्दछ । डर पनि वास्तवमा एक किसिमको मानसिक पीडा नै हो । हुन […]
मानसिक असन्तुलित बिरामीलाई किन लगाइन्छ बिजुलीको झट्का ?
जब कसैको दिमागी सन्तुलनमा खराबी देखिन्छ तब सोको उपचारका लागि किन उसमाथि विद्युतको झट्का लगाइन्छ । किन सजिलै भनिन्छ कि विद्युतको झट्काबाट दिमान सन्तुलनमा आएँछ र असन्तुलन ठीक हुन्छ ? आफ्ना बिरामीहरुलाई करेन्टको झट्का लगाउँदा आपत्ति जनाउने वा विरोध गर्नेहरुका लागि हालसालै प्रकाशित एउटा शोधले उपयुक्त जवाफ दिएको छ । एबरडिन विश्वविद्यालय शोधकर्ताहरुले बिरामीलाई करेन्टको […]
मुखमा अल्सर हुनुको ७ करणहरु
मुखमा अल्सर धेरै सामान्य कुरा हो र सामान्य जनसंख्याको लगभग २० प्रतिशतलाई मौखिक स्वास्थ्य सम्बन्धित बिमारीहरु हुने गर्छ। साथै मानिसको जीवनमा कम्तिमा एकपटक मुखको अल्सर भयको हुन्छ । मुखको अल्सर महिलाहरुमा धेरै सामान्य भएतापनि युवा र बच्चाहरुमा पनि यस्को असर पर्ने गर्छ। मुखको अल्सरको कारण जानेर यस्लाई सजिलै रोक्न सकिन्छ्। यहाँ मुखमा हुने अल्सरको साधारण कारणहरुबारे […]
विश्व योग दिवस जून २१ (आजको दिन):जान्नुहोस योगका फाइदाहरु
७,असार २०७३- नेपालमा प्रथम पटक माघ १ लाई योगदिवसका रुपमा मनाउन थालिएको थियो। पछि संयुक्त राष्ट्रसंघले जून २१ (आजको दिन) लाई विश्वयोग दिवसका रुपमा घोषणा गरी मनाउन थालेको छ।प्राचीन कालदेखि ऋषिहरुले विकसित गरेको योग साधनाका साथसाथै आयुर्वेद चिकित्सा पद्दति पनि हो । योग शब्द संस्कृतकोर् युज्’ धातुबाट निर्मित छ, जसको अर्थ जोड्नु हुन्छ । आत्माको […]
बिभिन्न रोग निको पार्न पानीको भूमिका
-राम ठकुरी हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो बनाउन पानीको निकै महत्व हुन्छ । बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुको महत्व अझ धेरैनै छ । आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्सा पद्दतिले खाली पेटमा पानी पिउनु महत्वपूर्ण हुन्छ बताएको छ । बिहान उठेपछि कमसेकम चार गिलास अर्थात् १ लिटर पानी पिउनुपर्छ । यसबाट हाम्रो पाचन प्रणाली दुरुस्त हुन्छ । साथै अन्य […]
धनुषा कुष्ठरोगको उच्च जोखिममा, जिल्लाभरि १७७ जना प्रभावित
जनकपुरधाम। धनुषा जिल्लाका छवटा गाविस कुष्ठरोगको उच्च जोखिममा रहेको बुझिएको छ ।जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका अनुसार कुष्ठरोगको उच्च जोखिममा परेका डेवडिहा, इटहर्वा, खजुरी, मुखियापट्टी, कुर्था तथा बननिया गाविस रहेका छन् । जिल्लाभरि १७७ जना कुष्ठरोग प्रभावित रहेका छन् भने डेवडिहा गाविसमा मात्र १९ जना कुष्ठरोग प्रभावित रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । आजमात्रै थप पाँच […]
पुरुषले महिलालाई प्रभावित गर्न बोल्ने ७ झुटहरु
थाहा पाउनुहोस्, मिन्स भएको बेला सेक्स गर्नु हुन्छ की हुँदैन ?
बलिउड अभिनेत्री जरिन खानको खुलासा, सलमान खानसँग मेरो विवाह हुँदैछ
अस्मिताको बयान सकियो, रवि र युवराजको भोलि
रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता
रवि लामिछानेसहित ३ जनालाई आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग लगाउन प्रहरीको राय, अब के होला ?
यी अंगहरु ठूला हुने महिला हुन्छन् भाग्यमानी
कस्तो स्वभावकी युवतीले पहिलो नजरमै प्रेम गर्छन् ?
२२ चिकित्सकको २४ घण्टे अल्टिमेटम
यस्तो अबस्थामा झुकिएर पनि यौन सम्पर्क नगर्नुस !